Fifandonana tamin’ny dahalo: zandary iray maty voatifitra, iray voa teo amin’ny feny | NewsMada
Fifandonana tamin’ny dahalo: zandary iray maty voatifitra, iray voa teo amin’ny feny
Nandritra ny fifandonana noho ny halatra omby, nitranga tao amin’ny fokontany sady kaominina ambanivohitr’Ambatomivary, distrikan’i Betroka, ny asabotsy teo, lavon’ny balan’ny dahalo ny zandary GHC Rakotoarison Jeannot. Naratra voatifitra teo amin’ny feny kosa ny kaomandin’ny borigady.
Lavo am-perinasa noho ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ny zandary iray mitondra ny galona GHC (Gendarme hors classe) Rakotoarison Jeannot miasa ao amin’ny borigady Isoanala. Nitrangana halatra omby tao amin’ny fokontany sady kaominina ambanivohitr’Ambatomivary, distrikan’i Betroka, afakomaly tamin’ny 9 ora maraina. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, omby miisa 100 nentina hamidy ireo norobain’ny dahalo manodidina ny 50 lahy niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika ireto. Nihazo ny lalana mankany Andriry ny lalan’ireo dahalo nandroaka ny omby tamin’io fotoana io. Nahazo antso ka namaly izany avy hatrany ireo zandary avy ao amin’ny borigady Isoanala raha vao nandre ny antso vonjin’ireo mponina niharan’ny fanafihana. Namonjy kizo tany amin’ny fokontany Amindo, kaominina ambanivohitr’i Isoanala, avy hatrany ireo zandary hanakana ny lalan’ireo dahalo. Nisy anefa ireo mpiray tendro amin’ireo dahalo eo an-tanàna ihany, nampandre ny namany, ka izy ireo nametraka vela-pandrika mialoha hanakanana ny dian’ireo zandary ireo.
Dahalo dimy indray maty voatifitra…
Tifitra variraraka anefa ny nitsena ireo zandary teny an-dalana ka lavo tamin’izany ilay zandary GHC raha naratra kosa ilay kaomandin’ny borigady. Na teo aza anefa izany, tsy nihemotra fa mbola afaka nifanandrina tamin’ireo dahalo ihany ireto zandary ireto ka dahalo miisa dimy indray tsy tafarina intsony (maty). Nisy ihany koa ireo dahalo naratra, saingy nentin’ny namany nitsoaka niaraka tamin’ireo afa-nandositra. Mitohy ny fanenjehana ireo dahalo ireo hatramin’ny omaly ary efa tonga any an-toerana koa ny zandarin’ny FIGN avy any amin’ny Usad (Unité spécial anti-dahalo) efa any am-pamitana fisafoana fisorohana asan-dahalo any amin’ny kaominina hafa ao anatin’ny distrikan’i Betroka ihany.
Manao sorona ny ainy hatrany ny zandary any amin’ireo faritra mena amin’ny asan-dahalo. Na eo aza ilay tarigetra hoe : ”ho an’ny tanindrazana”, tokony hojeren’ny fanjakana, indrindra fa ilay filoham-pirenena lany, ity resaka tsy fandriampahalemana ity. Nipoapoaka nandritra ny fampielezan-kevitr’ireo kandidà fa hanao vaindohan-draharaha momba ity tsy fandriampahalemana ity izy ireo. Samy manana ny paikady ny rehetra ary misy mihitsy ireo nampanantena fa ho fongana io tsy fandriampahalamena io raha izy no lany eo. Manginy fotsiny ny hoe homena asa ireo dahalo ireo, amin’izay, tsy mangalatra omby intsony. Zary fisehosehoana ivelany fotsiny anefa izany satria maika hahazo seza. Fampielezan-kevitra fotsiny ireny fa ny hita aloha, zandary iray no efa namoy ny ainy ankoatra ireo maty tany aloha.